Marko 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
8 Nna no mu a ɛbae bio sɛ nnipadɔm pii wɔ hɔ a wonni hwee a wobedi no, ɔfrɛɛ asuafo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ:+ 2 “Nnipa yi yɛ me mmɔbɔ,+ efisɛ nnansa ni a wɔatena me nkyɛn na wonni hwee a wobedi; 3 na sɛ migya wɔn kwan sɛ wɔmfa ɔyafumpan nkɔ wɔn fie a, wobetwitwa ahwe kwan so. Na wɔn mu bi fi akyirikyiri.” 4 Na n’asuafo no buae sɛ: “Ɛha a atew ne ho yi, ɛhe na obi betumi anya paanoo a ɛbɛsõ nnipa yi?”+ 5 Na ɔtoaa so bisaa wɔn sɛ: “Paanoo ahe na mowɔ?” Wɔkae sɛ: “Ason.”+ 6 Na ɔkae ma nnipadɔm no tenatenaa fam, na ɔfaa paanoo ason no daa ase+ bubuu mu, na ofii ase de maa n’asuafo no sɛ wɔnkyekyɛ, na wɔkyekyɛ maa nnipakuw no.+ 7 Na wɔwɔ mpataa nketewa kakraa bi nso wɔ hɔ; na ohyiraa so no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnkyekyɛ ɛno nso.+ 8 Enti wodi mee, na wɔsesaw ase mporoporowa nkɛntɛn ason mãmã.+ 9 Ná mmarima a wɔwɔ hɔ bɛyɛ mpemnan. Afei ogyaa wɔn kwan.+ 10 Na ɛhɔ ara ɔne n’asuafo no foroo ɔkorow kɔɔ Dalmanuta mpɔtam.+ 11 Ɛha na Farisifo no bae, na wofii ase ne no gyee akyinnye, hwehwɛɛ ɔsoro sɛnkyerɛnne de sɔɔ no hwɛe.+ 12 Enti osii apini+ ne honhom mu kae sɛ: “Dɛn nti na awo ntoatoaso yi hwehwɛ sɛnkyerɛnne? Nokwarem mise mo sɛ, wɔremma awo ntoatoaso yi sɛnkyerɛnne biara.”+ 13 Ɛnna ogyaw wɔn hɔ san kɔforoo ɔkorow no, na ofii hɔ kɔɔ asuogya. 14 Sɛnea ɛyɛe no, wɔn werɛ fii sɛ wɔbɛfa paanoo, na na wonni hwee wɔ wɔn ho wɔ ɔkorow no mu sɛ paanoo biako.+ 15 Na ofii ase ka kyerɛɛ wɔn pefee sɛ: “Momma mo ani nna hɔ, monhwɛ mo ho yiye Farisifo ne Herode mmɔkaw ho.”+ 16 Enti wofii ase ne wɔn ho gyigyee akyinnye wɔ paanoo a wɔamfa no ho.+ 17 Ohui no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Dɛn nti na paanoo a munni ma mugye akyinnye?+ So munhu nea ɛkyerɛ? So mo koma ntumi nte nneɛma ase?+ 18 ‘Ɛmfa ho sɛ mowɔ ani no munhu ade anaa; na ɛmfa ho sɛ mowɔ aso no monte asɛm anaa?’+ Na so monkae, 19 bere a mibubuu paanoo+ anum mu maa nnipa mpemnum no, ase mporoporowa nkɛntɛn dodow ahe na mosesawee?” Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Dumien.”+ 20 “Bere a mibubuu ason mu maa nnipa mpemnan no, ase mporoporowa nkɛntɛn dodow ahe na mosesawee?” Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ason.”+ 21 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “So munnya nhuu nea ɛkyerɛ?”+ 22 Afei wokoduu Betsaida. Ɛha na wɔde onifuraefo bi brɛɛ no, na wɔpaa no kyɛw sɛ ɔmfa ne nsa nka+ no. 23 Na osoo onifuraefo no nsa de no kɔɔ kurow no akyi, na ɔtee ntasu+ guu n’ani so, de ne nsa guu no so na ofii ase bisaa no sɛ: “Wuhu biribi?” 24 Na ɔbarima no maa n’ani so, na ɔkae sɛ: “Mihu nnipa, efisɛ mihu biribi te sɛ nnua, nanso ɛredi akɔneaba.” 25 Ɛnna ɔsan de ne nsa too ɔbarima no ani so, na ɔbarima no huu ade yiye, na ne ho tɔɔ no, na afei ohuu biribiara fann. 26 Enti ɔma ɔkɔɔ fie, na ɔkae sɛ: “Nkɔ kurow no mu.”+ 27 Ɛnna Yesu ne n’asuafo no fii hɔ kɔɔ Kaesarea Filipi nkuraase, na wɔnam kwan so no obisaa n’asuafo no nsɛm, kae sɛ: “Nkurɔfo se mene hena?”+ 28 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ebinom se Yohane Suboni,+ na ebinom se Elia,+ afoforo nso se Adiyifo no mu biako.”+ 29 Na ɔtoo asɛmmisa no maa wɔn sɛ: “Na mo nso muse meyɛ hena?” Petro bua see no sɛ: “Wone Kristo no.”+ 30 Ɛnna ɔbaraa wɔn denneennen sɛ wɔnnka ne ho asɛm nnkyerɛ obiara.+ 31 Afei ofii ase kyerɛkyerɛɛ wɔn sɛ etwa sɛ onipa Ba no hu amane pii na mpanyimfo ne asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no po no, na wokum no,+ na nnansa so wasɔre.+ 32 Nokwarem no, ɔde akokoduru na ɛkaa saa asɛm no. Na Petro de no kɔɔ nkyɛn fii ase kaa n’anim.+ 33 Ɔdan ne ho hwɛɛ n’asuafo no, na ɔkaa Petro anim sɛ: “Fi me so, Satan, efisɛ wunnwen Onyankopɔn adwene, na mmom nnipa adwene.”+ 34 Ɛnna ɔfrɛɛ nnipakuw no ne n’asuafo no baa ne nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ obi pɛ sɛ odi m’akyi a, ma ɔmpa ne ho akyi na ɔmfa n’asɛndua na onni m’akyi daa.+ 35 Na obiara a ɔpɛ sɛ ogye ne kra nkwa no bɛhwere; nanso obiara a me ne asɛmpa no nti ɔbɛhwere ne kra no bɛkora so.+ 36 Nokwarem no, mfaso bɛn na ɛwɔ so sɛ onipa benya wiase nyinaa na wahwere ne kra?+ 37 Dɛn koraa na obi de bɛsesa ne kra?+ 38 Na obiara a ɔbɛma n’ani awu me ne me nsɛm ho wɔ nnɛ mma awaresɛefo ne nnebɔneyɛfo yi mu no, ɔno nso ho bɛyɛ onipa Ba no aniwu+ bere a waba n’Agya anuonyam mu a abɔfo kronkron ka ne ho no.”+